Shirkadaha Soosaarayaasha, Shirkadaha Alaabada, Warshad - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Number Model: CAWLAN
SAAMAYNTA BADAN & SHAQADA PREMIUN - Labis daaqad ku habboon qurxinta guriga, gaar ahaan Kirismaska, Maalinta Thanksgiving. Midabyo badan oo la doorto, oo ku habboon qaab kale. Dharka laftiisu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan adduunka. Muuqaalka xarrago leh, waxay ku siinaysaa jawi raaxo leh oo raaxo leh qolka. Waxyaabaha waa 100% polyester, waxay caqabad ku noqon kartaa 85% -93% iftiinka iyo ray UV.
NOOCA XIRAN & KHATARTA CAADI BADAN –.waxay yihiin daah madow ama daah-furan. Miisaanka dharka waa 200gsm ilaa 320gsm. Aad bay u jilicsan yihiin oo waa u fiican yihiin taabashada. Dheeraad ku habboon qolka jiifka, qolka fadhiga, qolka carruurta iyo wixii la mid ah. Waxyaabaha tayada la xushay, oo aan lahayn hems siman, iyo xakamaynta tayada adag ee khibrada badeecada. Uma adkaysan doontid dhawaqa deriska dhawaqiisa iyo foodhida baabuurka. Runtii way u fiican tahay hurdada, gaar ahaan carruurta.
100% caag. Wax la mid ah iyo midab dib hore. Mashiinka la dhaqi karo oo ka hooseeya 30 darajo. Xor ayaad u tahay inaad nala soo xiriirto haddii aad qabtid su'aalo kale.
Waxaa laga farsameeyay 100% dhar tayo sare leh oo Super Soft (Polyester, Imported). Daaha madow ee qalinka qalinku waa mid waara oo raaxo leh in la taabto. Ka jooji 85-95% ileyska qorraxda iyo shucaaca UV (Midabka Madoow wuxuu si fiican u shaqeeyaa) iyada oo aan wax dahaadh ah la helin mahadnaq xagga tiknoolajiyada saddexda weave ah. Hooska iftiinka & yareynta buuqa asturnaanta iyo hurdada aan qasnayn. Marka waxay xaqiijin kartaa in dadka aysan carqaladeyn doonin dibadda.